May 21, 2021 - Babal Khabar
May212021 by EditorNo Comments
विदेश काम गर्न गएपछि श्रीमानले छोडे विहे गर्न केटाको खोजिमा अहिलेसम्मको कमाई हुनेवाला श्रीमानको नाममा गरिदिने
म नेपालमा एक निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षिका थिएँ । श्रीमान् पनि एक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा पढाउनुहुन्थ्यो । हामी दुई श्रीमान् श्रीमती, हाम्रा दुई छोराछोरी सानो सुखी परिवार । काठमाडौँमा एउटा पुस्तेनी घर थियो । हाम्रो भागमा तीन कोठा लाग्यो । हामीलाई बस्न तीन कोठा नै हामीलाई प्रर्याप्त थियो । घर भाडा तिर्नु नपर्नेभएकाले हामी दुई बूढाबूढीको कमाइले हामीलाई छेलोखेलो थियो । एक दिन श्रीमान्ले केके सुनेर आउनुभयो, अनायस नै राती इजरायलको कुरा निकाल्नुभयो । त्यो दिनदेखि त मेरा श्रीमान्ले सँधैँजसो केही न केही इजरायलका बारेमा नयाँ कुरा ल्याएर मलाई दिनहुँ जसो सुनाउने गर्न थाल्नुभयो । एक दिन मैले झर्को मान्दै भने, हामीलाई के काम इजरायलको गफ । न जाने गाउँको बाटै नसोध्नू । किन र तिमी पनि जाऊ न इजरायल ! अब त केटाकेटी पनि ठूला हुँदै गए, भोलि उनीहरूको उच्च शिक्षाका लागि पनि पैसा चाहिन्छ । हाम्रो कमाइ तन्किन
बहुमत छ’भनेर प्रधानमन्त्रीले फेरि दाबी गर्दा दुनियाँ हाँसेको छ: विश्वप्रकाश शर्मा
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले `बहुमत छ´ भनेर प्रधानमन्त्रीले फेरि दाबी गर्दा जग हँसाइ भएको बताएका छन्। शुक्रबार साँझ ट्वीट गर्दै उनले भनेका छन्- 'बहुमत छैन' भनेर विश्वासको मतबाट भागेका प्रधानमन्त्रीले 'बहुमत छ' भनेर फेरि दाबी गर्दा दुनियाँ हाँसेको छ ! लाज स्वयं लजाएको छ ! उनले राष्ट्रपतिलाई समेत अलमलमा नपरीकन संस्थाको गरिमा जोगाउन समेत सुझाव दिएका छन्। उनले भनेका छन्- राष्ट्रपति महोदया ! सतिसालको शिरमा हुनुपर्ने यहाँप्रतिको श्रद्धा बकैनाको फेदमा झरिसक्योl अलमलको गोलमालमा संस्थाको गरिमा ओह्रालो अझै कति लगाउनु हुन्छ ? राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार नयाँ सरकारको गठन लागि आह्वान गरेसँगै पदका लागि गठबन्धनतर्फबाट शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेबाट केपीशर्मा ओली दाबी प्रस्तुत गरेका छन्। सरकार गठनका लागि आवश्यक सांसदहरूको सङ्ख्य
एमालेका २६ संसद कारबाहीमा हेर्नुहोस को को परे ?
काठमाडौं । नेकपा एमालेले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने २६ जना सांसदलाई दलको साधारण सदस्य पनि नरहने गरी कारबाही गर्ने सूचना राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ । उनीहरुले दलीय अनुशासन उल्लंघन गरेकाले कारबाही गर्ने जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ । उनीहरुले दलीय अनुशासन उल्लंघन गरेकाले साधारण सदस्य पनि नरहने गरी कारबाही गर्ने जानकारी गराएका छौं’ उनले भने । शुक्रबार संविधानको धारा ७६(५) अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएका छन् । जसमा नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका २६ सांसदले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । काठमाडौं । नेकपा एमालेले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने २६ जना सांसदलाई दलको साधारण सदस्य पनि नरहने गरी कारबाही
ओलीलाई ७६ (५) धाराबाट प्रधानमन्त्री नियुक्तिको यस्तो हुँदै छ तयारी
काठमाडौं, ७ जेठ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको तयारी गरेकी छिन् । ओलीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको तयारी भएको हो । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम बहुमतको सरकार आव्हान गर्दा ओलीले नेकपा एमालेको १२१ र जनता समाजवादी पार्टीको ३२ सांसदको समर्थन रहेको दाबी प्रस्तुत गरेकोमा त्यसैलाई सदर गरिने तयारी शितलनिवासले गरेको विश्वस्त स्रोतले जानकारी दिएको छ । ओलीले एमाले संसदीय दलको नेताको हैसियतले र जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षरबाट समर्थनको दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । तर, दुवै दलका हरेक सांसदको हस्ताक्षर भने प्रस्तुत गरिएको छैन । यसअघि जसपाको संसदीय दलको नेतामा महतो चयन भएको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । यसको उद्देश्य अहिले खुलेको छ । नेपाल
देउवाले आफुलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भन्दै १४९ सांसदको नक्कली हस्ताक्षर बोकेर शीतलनिवास पुगेको पुष्टी भएपछी….
विपक्षी गठबन्धनले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्ने भएका छन् । दिउँसो सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गर्न लागेको हो । स्रोतका अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षर लिएर विपक्षी गठबन्धनका नेता शीतल निवास पुगिसकेका छन् । संसदमा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, नेपाल समूहका २७ र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्षका गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षर जुटेको हो। विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा बहुमत पुर्‍याएर नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि एमाले नेता नेपाल पक्षका २८ सांसदले हस्ताक्षर गरेको समाचारले अहिले एमालेमा भूकम्प आइसकेको छ। कांग्रेस नेता गगन थापाले एमालेको माधव नेपाल पक्षका सांसदको समेत हस्ताक्षर लिइएको पुष्टि गरेका छन
राजीनामा दिनुपर्छ भनेर कहाँ लेख्या छ ? : प्रधानमन्त्री ओलि
७ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ (५) को सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न आफूले राजीनामा गर्न नपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले धारा ७६ (५) को सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न आफूले राजीनामा दिनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था नभएको जिकिर गरे । ‘राजीनामा दिनुपर्छ भनेर कहाँ लेख्या छ ?’ उनले प्रश्न गरे । आफूले विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था भए पनि आफूले लिन नचाहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । ‘मैले विश्वासको मत लिन आवश्यक ठानिन भने के गर्ने ? संविधानमा त छैन, संविधानमा छैन भने अर्को विकल्पमा जाने, विकल्प रोकिएको छैन’ उनले भने । आफूले राजीनामा दिए पनि, मार्गप्रशस्त गरे पनि, त्यसै गए पनि धारा ७६ (५) कै प्रक्रियामा जानुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले आफूले राजीनामा नदिए पनि र विश्वासको मत नलिए पनि सरकार गठनका लागि सबै विकल्प खुला गरेको ज
कांग्रेसको आकस्मिक बैठकले किन गर्यो यस्तो निर्णय? राष्ट्रपति विरुद्ध पनि पर्यो सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौ । राष्टपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि गरेको आह्वान असंवैधानिक भएको ठहर नेपाली काँग्रेसले गरेको छ । २४ घण्टाको समय दिएर राष्ट्रपतिले विहिवार नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेपछि शुक्रवार विहान आकस्मिक रुपमा बसेको कांग्रेसको बैठकले यस्तो ठहर गरेको हो । त्यस्तै सरकारले संविधानको मर्म र भावनामाथि प्र हा र गरेको निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा शुक्रवार विहान आकस्मिक बसेको पार्टी पदाधिकारीलगायतका बैठकले सरकारले संविधानको मर्म र भावनामाथि प्र हा र गरेको ठहर गरेको सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए । बैठक पछि पत्रकारहरुसंग कुरा गर्दै नेता महतले अबकसरी अघि बढ्ने भन्नेमा अरु दलसँग छलफल गरेर थप निर्णय लिइने बताए । ‘ओली सरकारबाट संविधानको मर्म र भावनामाथि प्र हा र गर्ने कोशिस भएको छ। त्यसलाई हामी सफल हुन दिँदैनौँ’, उनले भने, ‘अब कुन बाटो तय
कोरोनाको बिमारी धामीको भरमा हेर्नुहोस बिजोग…….
जाजरकोट । गाउँभरि घरैपिच्छे बिरामी हुँदा सर्वसाधारण हैरान भएका छन् । जिल्लाका सबै पालिकामा यस्तो समस्या देखिएको छ । कुशे गाउँपालिका अधिकांश गाउँमा ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, जिउ दुख्नेलगायत लक्षण देखिएको छ । गाउँमा सबै बिरामी हुँदा हैरान भएको र आफूलाई समेत सन्चो नभएको रातो नेपालीले बताए । “ गाउँमा कसैको परीक्षण भएको छैन”, नेपालीले भने । त्यस्तै, नलगाड नगरपालिकाको कैना, टट्टा, हल्चौर बारेकोटको रामीडाँडा, धौलाकोटलगायत गाउँमा पनि ज्वरोका बिरामीको सङ्ख्या बढिरहेको छ । गाउँभरि शङ्कास्पद बिरामी बढे पनि परीक्षण र उपचार हुन नसकेको हल्चौरका हरिबहादुर खत्रीले बताए । “अधिकांशलाई कोरोना भएको आशङ्का छ, तर परीक्षण र उपचार नहुँदा झारफुक र जडीबुटीको उपचारमा भर परेको छ’, उनले भने, “कयौंपल्ट जनप्रतिनिधिलाई भनियो तर वास्तै गरेनन् ।” गाउँमा घरघरै बिरामी भए पनि तातोपानी, जडीबुटी र धामीझाँक्रीको झारफुकका
बाबुराम भट्टराई “लौरो” लाई प्रधानमन्त्री बनाउ किन यस्तो भने हेर्नुस के ठिक हो त ?
जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार वैकल्पिक सरकार बनाउनुपर्ने बताएका छन् । भट्टराईले संसद्, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि वैकल्पिक सरकार बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । त्यसका लागि सबैले आवश्यक त्याग र बलिदान गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् । उनले शुक्रबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, 'संसद,संविधान,लोकतन्त्रको रक्षा आजको अहं प्रश्न हो!जे गरेर रक्षा हुन्छ त्यही गरौं।सबैले आवश्यक त्याग/बलिदान गरौं।लौरो उभ्याएर भए पनि ७६(५)को वैकल्पिक सरकार दिऊॅ!आजै गरौं,अहिल्यै गरौं! बीपी/पीएलदेखि हाम्रो पुस्तासम्मले लडेर ल्याएको संविधान/लोकतन्त्रको रक्षा नभए इतिहासले धिक्कार्नेछ!' यसअघि बिहीबार बेलुका भट्टराईले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधानमाठ्ठि आक्रमण गरेको बताएका थिए । उनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले 'कोरोना महामारीका बेला अन
कुखुराको मूल्य प्रतिकिलो अहिलेसम्मकै कम मूल्यलमा झर्याे, मारमा किसान ! कतिमा पाइन्छ? पुरा हेर्नुहोस्।
काठमान्डाें / बजारमा कुखुराको मासुको खपत घटेसँगै मूल्य पनि घट्न थालेको छ । एक महिनाअघि प्रतिकेजी ४ सय ५० रुपैयाँ रहेको मासुको मूल्य अहिले केजीमा एक सय रुपैयाँभन्दा बढी घटेको हो । अहिले बजारमा प्रतिकिलो ३३० देखि ३४० रुपैयाँमा झरेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि गरिएको निषेधाज्ञासँगै बजारमा मासुको खपत घट्दै गएको हो । खपत घटेसँगै मूल्य पनि घटेको छ । राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघ नेपालका अध्यक्ष जंगबहादुर बिसीले निषेधाज्ञासँगै बजारमा कुखुराको मासुको मूल्य घटेर ३ सय ४० रुपैयाँमा झरेको बताए । कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि मासुको खपत घटेपछि मूल्य पनि घट्दै गएको उनको भनाइ छ । कोभिडका कारण होटेल रेस्टुराँ बन्द भएको र उपभोग नै कम हुन थालेपछि मासुको खपत घट्दै गएको हो । संघका अनुसार सामान्य अवस्थामा दैनिक ३ लाखदेखि साढे ३ लाख किलो मासु खपत हुने उपत्यकामा हाल ८० देखि ९० हजार किलोमात्रै ख